Kiobà : Fisamborana ilay bilaogera Yoani Sànchez · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2019 4:27 GMT
Nosamborina tany amin’ny faritanin’i Bayamo, ilay bilaogera sady mpiaro ny zon’olombelona, Yoani Sànchez. Nandeha tany an-toerana izy mba hitatitra ny fitsaràna an’ilay Espaniola Angel Carromero, izay voampanga tamin'ny famonoana olona tsy nahy taorian’ny lozam-pifamoivoizana iray nahafaty an’i Oswaldo Payá, izay mpiaro ny demaokrasia, sy ilay mpikatroka Harold Cepero. Tonga tany Kiobà i Angel Carromero tamin’ny volana Jolay (2012) mba hihaona amin’ireo mpikatroka ao amin’ny firenena.
Nosamborina niaraka tamin’i Yoani Sànchez, izay mpanoratra ny bilaogy Generacion Y sady tompon’andraikitra ny fanoratana lahatsoratra ao amin'ny bilaogin’ny vondrom-piarahamonina Voces Cubanas, ny vadiny, Reinaldo Escobar, izay mpanao gazety mahaleotena, ary niaraka tamin’ilay bilaogera Augustin Diaz. Tamin’ny ora nanoratana, vitsivitsy ihany ny vaovao niparitaka momba ny fisamborana azy ireo. Mitaky ny famotsorana tsy misy hatak’andro ireo bilaogera miisa telo ireo ny Komity Mpiaro ny Mpanao gazety, fikambanana miaro ny fahalalahana an-gazety.
Sarotra ny mahazo vaovao sy manazava hoe avy aiza izy ireo. Na dia izany aza, maro ireo fampahalalam-baovao no nitatitra fa i Yohandry Fantana, ilay bilaogera mpomba ny governemanta, no voalohany nitatitra ny tantara. Nanoratra izy fa nanatrika ny fitsarana i Yoani Sànchez mba hamoronana ny «Fampisehoana [cirque] malaza an-gazety».
Nitatitra taty aoriana kely i Orlando Luis Pardo Lazo, bilaogera malaza iray hafa sady namana akaiky an’i Yoani Sànchez fa noahiahiany ho nalaina ny findain'i Sànchez.
Tao amin’ny Twitter, nitatitra ity tranga ity ireo olona manerana izao tontolo izao ary niantso ny famotsorana azy miaraka amin’ny tenirohy #YoaniLibre.
Nanoratra tao amin’ny bilaogy Penúltimos Días i Ernesto Hernandez Busto hoe :
Naneho hevitra tao amin’ny Facebook i Jose Conde hoe :
Azonao jerena ny vaovao bebe kokoa momba an’ Kiobà ato amin’ny pejin’ny Global Voices natokana ho an’i Kioba.